स्टाइलिश क्रप टिप्सको नोटिस लिन - सेलेब स्टाइल
स्टाइलिश क्रप टिप्सको नोटिस लिन
क्रप शीर्षहरू सजिलैसँग वार्डरोब आवश्यक भएका छन् सबैको स्वामित्व चाहिन्छ। स्टाइलिश टुक्राहरू स्टाइल गर्न सजिलो, फ्याक्नको लागि सजिलो, लेयर गर्न सजिलो, हाम्रो मतलब केमा मनपर्दैन?
वाई २ के फैशनले कमब्याक गरिरहेको छ र क्रप टप्सले एक प्रमुख प्रवृत्ति बनायो जुन लोकप्रिय पेरिस हिल्टन, ब्रिट्नी स्पीयर्स, लिन्डसे लोहान र बलिउडको आफ्नै करिश्मा कपूर र शिल्पा शेट्टी जस्ता प्रसिद्ध व्यक्तिहरूले लगाउँदछन्।
पेट को बोसो कम गर्न crunches
क्रप टोप्सलाई त्यसरी नै पहिरिने गरिदैन जुन उनीहरू २००० को दशकमा प्रयोग गर्थे, स्कीनी जीन्स बाहिर र उच्च कम्मरको प्यान्टहरू भित्र छिन्। यो जोडीले क्रपलाई शीर्ष पोशाक बनाउँदछ जसको फराकिलो दर्शकहरूले हेर्न सक्छन्, र ओडलहरू पनि थपे सान्त्वना र यसलाई बहुमुखी प्रतिभा।
२० बर्ष भन्दा बढी पछि, यो कपडाको चीजको फराकिलो स्पेक्ट्रममा विकसित भएको छ, हामीलाई अझ राम्रो आत्म-अभिव्यक्ति, प्रयोगको लागि मौका दिँदै, पूर्ण रमाइलो उल्लेख नगरी! कार्डाशियनहरूले अहिले क्रप माथि देखाइरहेका छन् र यस्तै छन् बलिउड सेलेब्स जस्तै आलिया भट्ट र सारा अली खान।
त्यहाँ फसल शीर्ष को धेरै प्रकार छन्, हाम्रो मनपर्ने मा गहिरो delve गरौं। तपाइँको लागि कस्तो प्रकारको बनाइएको छ भनेर पत्ता लगाउन स्क्रोल गर्नुहोस्!
१ बिकिनी क्रप शीर्ष
दुई एक काँध क्रप शीर्ष
3 अफ-शोल्डर क्रप शीर्ष
चार छाला क्रप शीर्ष
।। बेबी टी क्रप शीर्ष
। बटन माथि क्रप शीर्ष
।। क्रप गरिएको ब्लेज़र शीर्ष
9 Boxy फिट क्रप शीर्ष
१० FAQ हरू क्रप शीर्ष
बिकिनी क्रप शीर्ष
बिकिनी टप्स लेयरमा रमाइलो रूपमा लगाउन धेरै चाखलाग्दो हुन्छ, र एक व्यक्तिले चापलुसी र घुमावदार लुकको लागि माथिल्लो कम्मरको बोटमसँग जोड्न सक्छ। तिनीहरू ग्रीष्मकालको लागि एकदम उत्तम छन्। शनाया कपूरले बेन्ज मोनोक्रोम ईन्सेम्बलको एक भागको रूपमा उनको बान्डेउ बिकिनी क्रप शीर्ष लगाउँछिन्।
शैली सल्लाह: एक विरोधाभास रंगीन बिकिनी शीर्ष एक श्याकेट र आमाको साथ स्तरित शॉर्ट्स को लागी बनाउन सक्छ एक आश्चर्यजनक समुद्र तट दिन लुक।
एक काँध क्रप शीर्ष
दिनको र रातको समयमा बाहिर जानको लागि एउटा काँधमा उत्तम अंश हुन्छ। यस प्रकारको फसल शीर्षले यसलाई धेरै सजिलो बनाउँदछ शैली तपाईंको रूप , तपाइँ यसलाई शैली वा शैली शैली गर्न चाहनुहुन्छ कि। बाहुको अनौंठो विषुलोता रमाईलो र ठाडो छ। एक अनिर्णय दिनको लागि एक उत्तम विकल्प! क्याट्रिनाको निलो गुलाबी एक-काँध क्रप शीर्ष देखिन्छ शहर मा एक धूप को लागी सही हुन।
शैली सल्लाह: तपाइँको प्रेमिकाको साथ आकस्मिक चलचित्र मितिको लागि निलो आमा जीन्सको साथ जोडी बनाउनुहोस् वा यसलाई शुक्रबार रातको बारको शेशका लागि छालाको बुट कट ट्राउजरको साथ जोडी गर्नुहोस्।
अफ-शोल्डर क्रप शीर्ष
कुटीज-कोर सौंदर्य हालै इन्टरनेट मा सबै भरखरै देखिन्छ र यो बाली शीर्ष माथि निर्बाध रूपमा मात्र संग मिश्रित। डिक्लउटेज शरीरको यस्तै गन्धकारी तर सुन्दर भाग हो र यस शीर्षले त्यसलाई जोड दिन अनुमति दिन्छ। यो एक धेरै राम्रो प्रकारको शीर्ष हो, विशेष गरी एउटा दाखबारीमा अpes्गुर टिप्न। अनन्याले ट्राउजरहरूसँग मिल्न चकलेट ब्राउन अफ-शोल्डर क्रप शीर्ष लगाउँदछन्!
शैली सल्लाह: एक फ्लोसी मैक्सी स्कर्टको साथ जोडा बनाउनुहोस् तपाइँको भित्री कुटीर केटीलाई च्यानल गर्न। एक नेकपीस एक उत्तम गौण यसको साथ जाने प्राथमिकता छनौट र सुन हो।
छाला क्रप शीर्ष
कपाल झर्नेको घरेलु उपचार
छाला एक यस्तो सामग्री हो जुन सजिलैसँग संगठनमा उत्साह थप्दछ, एक ड्रेसियर र फसल शीर्षको थप पुट-सँगै संस्करणको लागि बनाउँदछ। जान्हवी एकदम आश्चर्यजनक देखिन्छ यस खैरो चिसो-काँधमा छालाको फसल शीर्षमा।
शैली सल्लाह: तपाईको छालाको फसल माथि सँगै लेदर पेन्टको साथ जोडी गर्नुहोस् घटनामा टाउको घुमाउनको लागि, यो आफ्नो मनपर्ने स्टिलेटोको जोडीसँग जोड्न नभुल्नुहोस्!
बेबी टी क्रप शीर्ष
बेबी टी शाब्दिक टीज हुन् जुन सानो देखि सम्भावित रूपमा बच्चाको रूपमा देखा पर्दछ। महिलाको लुगालाई बच्चाको लुगाहरू कल गर्नु अपमानजनक हुन सक्छ र त्यो त्यस तरीकाले पहिले प्रयोग भएको थियो तर यस किसिमको टीको नामको स्वामित्व छ। यसले एक धेरै प्यारा टुक्रा बनाउँदछ जुन हामी सबैले प्रयास गर्नु पर्छ! हेली Bieber उनको ग्राफिक बेबी टी माध्यम मा मतदान गर्न व्यक्ति प्रोत्साहित गर्दछ।
शैली सल्लाह: बेबी टीहरू अल्छी दिनको पोशाक बनाउनको लागि द्रुत तरीका हो जुन प्रयासको भ्रम र एक साथ जोडिन्छ। थप राखिएको आत्माको लागि यसलाई जोगरहरूसँग जोडा बनाउनुहोस्।
बटन माथि क्रप शीर्ष
बटन अप क्रप टॉप्स एक सुपर प्यारा शैली हो जुनसँग उत्तम देखिन्छ फ्यूजन आउटफिटहरू , सारा अली खान देखिन्छ गर्मी-तैयार यस उज्ज्वल र रमाईलो पोशाक संग।
शैली सल्लाह: बटन अप क्रप टप्सलाई रमाईलो फ्यूजन प्रयोगका लागि चाँदीको झुमकसहित जोडी गर्न सकिन्छ।
किसान फसल शीर्ष मा बढि बढाइएको विशप आस्तीन सामान्यतया प्रवाह र सास फेब्रिक संग साथ। यी फसल को शीर्ष को प्रकारहरु सामान्यतया कुटीज-कोर वा बोहेमियन भावना सिर्जना गर्नुहोस्। अदिति उनको किसानको शीर्षमा छापिएको फ्लेयर प्यान्टको साथ जोडी दिन्छ जुन टर्कीबाट प्रेरित देखिन्छ।
अनुहारमा कपाल हटाउनका लागि घरेलु उपचार
शैली सल्लाह: ठूलो संख्यामा निर्माण विवरणसहितको एउटा टुक्रा अधिक तटस्थ र in्गमा उत्तम हुन्छ वास्तविक निर्माणमार्फत चम्काउनको लागि।
क्रप गरिएको ब्लेज़र शीर्ष
शक्तिशाली महिलाहरूले आफ्नो अभिव्यक्त गर्न कपडाको आवश्यक पर्दछ, क्रप गरिएको ब्लेजर शीर्षमा त्यहाँ शक्ति हुन अनुमति दिँदछ र ट्रेंडी र चंचलको लागि केहि बढी ओफ। अथिया एक सह-सेट को एक भागको रूपमा क्रप गरिएको ब्लेजर माथि भरोसाको किरण गर्दछ।
शैली सल्लाह: पहिले नै सम्पन्न टुक्राहरूमा साना डिजाइन तत्त्वहरू थप्नाले ताजा लुक बनाउन सक्छ जुन अझ रमाइलो छ।
Boxy फिट क्रप शीर्ष
छवि: @ jacquelinef143
पेटको बोसो घाटा को लागी व्यायाम
यो एक परेशानी रहित, सरल र प्रभावी छ। बक्की फिट क्रप शीर्ष आदर्श आरामदायक तर स्टाइलिश क्रप शीर्ष हो जुन तपाईंलाई सजिलै रमाइलो गर्न र मार्फत चमक दिन दिन्छ। जैकलिन जोडी उनको बक्की फिट क्रप शीर्ष हल्का धुन निलो डेनिम जीन्सको साथ आकस्मिक भागफल थप्न।
शैली सल्लाह: चंकी स्नीकर बक्सि फिट क्रप टप्ससँग राम्रोसँग जान्छन् र आउटफिटलाई थप स्ट्रीटवेयर उपयुक्त बनाउन सक्दछन्।
FAQ हरू क्रप शीर्ष
Q. के बालीनाँलो ट्रेंडी बनाउँछ?
TO क्रप शीर्षहरू कुनै पनि समयमा चाँडै शैलीबाट बाहिर निस्किंदैन जस्तो देखिन्छ, प्रवृत्ति आफैंले दोहोर्याउँदछ र २०२१ जस्तो लाग्छ जुन हामीले Y2k बाट प्रेरणा लिन्छौं र क्रप टपहरू त्यसबेला पछाडि प्रमुख प्रवृत्ति पनि थिए।
Q. एक बाक्लो शीर्ष स्टाइल गर्ने सबैभन्दा सहज तरिका के हो?
TO क्रप टपहरू एक बहुमुखी छुट्टै बन्यो जुन तपाईं दिनदिनै लगाउन सक्नुहुन्छ, चाहे तपाईं डे डेटाइम खोज्दै हुनुहुन्छ वा ग्लैडेड-अप रातको लागि प्रभाव पार्दै हुनुहुन्छ। एक एथलिजर-प्रेरित लुकको लागि मात्र जगरहरू र उच्च शीर्ष स्नीकरहरूको साथ जोडी गर्नुहोस्। यदि तपाइँ तपाइँको पोशाक टीममा केहि फ्लर्ट थप्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई उच्च कम्मर भएको छोटो प्यान्टको साथ, रंगहरू प्ले गर्न सकिन्छ!
Q. यो मौसममा बालीनालीको सबैभन्दा प्रासंगिक प्रकार कुन हो?
TO किसान फसल शीर्षहरू धेरै सान्दर्भिक छन् किनकि इन्टरनेट कुटीर केटीहरू र फार्महरूको आकांक्षी छविहरूले भरिएको छ, सम्भवतः महामारीको विकृतिबाट बच्न।
यो पनि पढ्नुहोस्: Lehenga पछाडि ब्लाउज डिजाइन यो विवाह Seतु को प्रयास गर्न
बेली फ्याट घटाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो व्यायाम
द्रुत कपाल विकास सुझाव घरेलु उपचार
व्यायाम घरमा पेटमा बोसो छिटो गुमाउन
योग आसन प्रक्रिया र लाभ
कपाल झर्नु पर्ने नियन्त्रण गर्ने प्राकृतिक तरिकाहरू